Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Ebe isii ịghọ ndị isi nke oge njem njem 2019 nke Salento
Ebe isii ịghọ ndị isi nke oge njem njem 2019 nke Salento
"Anyị chọrọ ịkọrọ gị Salento dị iche iche, jikọtara ya na ọnọdụ ime mmụọ na omenala okpukpe dị ka Tebụl nke St. Joseph na Giurdignano", Carmen Mancarella, onye nta akụkọ na-enye ma na-eduzi ogbako ndị nta akụkọ kwuru.
"Iwu niile nke omenala oge ochie a na-eweta ọtụtụ ezinụlọ sitere na mpaghara dị iche iche nke Salento, n'ihe dị ka ụbọchị nke March 19, iji dozie nri ọdịnala, tebụl ndị mara mma nke ghere oghe nye onye ọ bụla na-elepụ anya n'ụlọ ha."
"Ma n'etiti ọnọdụ ime mmụọ na okpukpe, ndị ọbịa ahụ na-enwekwa obi ụtọ nke Carnival nke Supersano na-enye na, gịnị kpatara na ọ bụghị, ndị na-emebi iwu, ma karịa ihe niile nwere ike itinye aka na otu puku ụzọ onye njem ahụ, bụ onye ọṅụ nke ibi ndụ Salento na-ewere ozugbo. " Carmen Mancarella na-akọwa, na-egosi ebe ndị njem nlegharị anya 2019 kacha mma agaghị echefu na Salento.
The Ionian na Adriatic oké osimiri na Marines nke Melendugno na Nardò, Ọgba Santa Maria di Leuca, obodo Galatina na ya Basilica na njegharị ndị na-amu amu nke tantalizing obodo nri.
Melendugno na-ekerịta 41% na-abawanye na ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ, na-aghọ ebe mbụ na Puglia maka mmụba nke ndị mba ọzọ si mba ọzọ, ekele maka ọmarịcha marinas nke Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell'Orso na Torre Sant'Andrea.
Nardò, Neretum oge ochie, nke nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 10 ya, taa bụ ebe ihe atụ maka ndị hụrụ obere njem na omenala n'anya. Grotte di Leuca, nkwụsị na-enweghị atụ na ezumike Salento, na-enye ọtụtụ ihe omume, site na njem gaa na njem ụgbọ mmiri.
Na Supersano, n'aka nke ọzọ, High Tailoring Carnival bụ ihe magburu onwe ya, n'etiti 2nd na 6th March, na ọkara nke mpaghara parading, ebe ọkara nke ọzọ na-arụsi ọrụ ike ịkwa uwe, na-elekọta egwu na nhazi nke ihe omume na na-emetụta ụmụ amaala niile.
Air Seychelles iji rụọ ọrụ ụgbọ elu oge na Antananarivo
British Airways CityFlyer malitere ọrụ kwa ụbọchị site na Munich ruo London City Airport
Ọdụm na-arụ ọrụ site na Lodge Fencing na Uganda
Ihe ngosi ihe owuwu nke Miami Beach. Site na nka...
Enwere ike ịzụ ahịa njem n'ịntanetị dabara na "New...
Tanzania na-akwado maka UNWTO Commission maka Africa…